Ngwaa na bekee - UniProyecta
Otu n'ime ihe mgbochi ndị a na -aghaghị imeri mgbe anyị chọrọ ịmụ asụsụ nke ọma ma mara ya nke ọma bụ isiokwu dị aghụghọ nke ụtọasụsụ.
Ọ dịghị onye na -enwe obi ụtọ ịmegharị usoro ngwaa ugboro ugboro ruo mgbe eburu ha n'isi, mana nke bụ eziokwu bụ na ịmara ngwaa ngwaa site n'obi dị mkpa iji rụọ ya. ahịrịokwu n'ụzọ ziri ezi na inwe ike isoro onye obodo ọ bụla nke asụsụ mba ọzọ anyị na -amụ kwurịta okwu, yabụ enweghị ihe ngọpụ.
Ngwaa bekee nwere ọtụtụ ihe jikọrọ ya na nke Spanish: a na -ejikọ ha n'otu ụzọ, ya bụ, enwere nnọchiaha maka onye ọ bụla (I →
, ị →
, ọ / ya / gị →
, anyị →
, ha / ha / ha you
), na enwekwara ụfọdụ ngwaa na -adịghị agbanwe agbanwe.
Ka ọ bụrụ ihe ziri ezi ma ọ bụ obere, enwere ihe ngwaa 200 na -adịghị agbanwe agbanwe n'asụsụ Bekee, dị ka ngwaa a ga -abụ, nke ga -abụ ihe dị ka SER anyị ma ọ bụ ESTAR, nke bụkwa otu n'ime ndị mbụ anyị na -eji, nke kachasị mkpa, n'ihi na ya anyị nwere ike nye ọtụtụ ozi gbasara onwe anyị mgbe anyị na -ewebata onwe anyị:
Kwuo aha: "
"(Abụ m Pedro)
Ịma ọkwa mba: "
"(Anyị bụ ndị Spain)
Nye afọ: “Na
(ị dị afọ 20)
Kwuo maka ọrụ: "
”(Ọ bụ onye nkuzi)
Mana tupu anyị amaba n'ịmụta ngwaa na -adịghị agbanwe agbanwe na Bekee, ka anyị buru ụzọ lelee ndị a na -eme mgbe niile.
1 Ngwa ngwa ngwa na Bekee
2 Okwu mmeghe na Bekee
2.1 Ngwaa Phrasal na Bekee
Ngwa ngwa ngwa na Bekee
Ọchịchị isi mkpịsị aka maka ngwaa mgbe niile bụ nke ahụ n'ime
a na -agbakwụnye ikpeazụ -s n'ụdị maka ya, nke ndị na -ekwu okwu anaghị ebu, dị ka ọ dị na ngwaa “kọwaa” ''
A na m akọwa →
Anyị kọwara →
Ị kọwara →
Ọ / ọ kọwara →
Ha na -akọwa →
Dị ka mmadụ niile, ewezuga ya / ya, nwere otu ụdị ngwaa, ọ dị ezigbo mkpa ịkpọ isiokwu ahụ (gị, anyị ...) ịmara onye a na -akpọ aha n'ahịrịokwu, nke na -abụghị na Spanish, nke enwere ike iduzi ya ugboro ugboro dịka iche adịghị mkpa.
(Pịa na onyonyo a ka ọ gbasaa)
Na ndị na -eme mgbe niile, gerund na -ejedebe na -ing (
) na onye nọ n'ime (
Enwere ọtụtụ ngwaa in English zuru oke mgbe niile nke a na-eji kwa ụbọchị. A na -ejikọ ha niile, na ọtụtụ ndị ọzọ n'otu ụzọ ahụ
[wpsm_comparison_table id = »2 ″ klas =» »]
Dịka ọmụmaatụ, anyị na -ekwu "
" (A chọrọ m enyemaka), "
”(Ana m amụ bekee) ma ọ bụ“ m siri ọkụkọ
”(Enwere m ọkụkọ ọkụkọ).
Okwu mmeghe na Bekee
Agbanyeghị, dị ka anyị rụtụrụ aka na mbụ, anyị na -ahụ ọtụtụ ngwaa ndị ọzọ na -eji ọtụtụ ihe eme ihe na -adịghị agbanwe agbanwe, yabụ, anaghị eso iwu njikọta ma ọ bụ nwee otu ụzọ ejikọ nke dị iche na nke ngwaa in English weere dị ka mgbe.
Ebe kacha amasịkarị mmejọ a bụ n'oge gara aga:
, nke na nke a anaghị agbaso iwu ọ bụla akọwapụtara.
Obere ndepụta kacha adịkarị, nke nwere ike inyere anyị aka icheta ha bụ:
[wpsm_comparison_table id = »3 ″ klas =» »]
Ka ọ dị ugbu a, ihe niile yiri ka ọ dị ọnụ ala ma o yighị ka ọ gụnyere ọtụtụ ihe isi ike, ọ bụrụhaala na anyị na -eleba anya na nkọwa ndị a wee nwaa iji ngwaa ndị a nke ọma.
Ngwaa Phrasal na Bekee
Ihe ọzọ na-ebutekarị isi ọwụwa bụ ihe a na-akpọ
, ama maka na ọ bụghị ezigbo ezigbo ndị na -amụ Bekee, kama ọ bụ onye iro.
Site n'inyere obere enyemaka, ị ga -ahụ na ọdụm anaghị eme ihe ike dị ka esi ese ya na ịchịkwa ha esighị ike.
Mana kedu ụdị ngwaa ndị a dị n'asụsụ Bekee na gịnị kpatara ọkụ ji were ha maka ọtụtụ ndị na -amụ ihe.
Ọ dị mma, iji ghọta okwu a nke ọma, anyị nwere ike bido site n'iji ha tụnyere ihe yiri nke asụsụ Spanish nwere yana nke bụ periphrasis, nke bụ njikọta ngwaa n'ụzọ nkeonwe yana okwu ọzọ, nke na -abụkarị a echiche ma ọ bụ nkọwa.
Inicio » Asụsụ » Inglés » Ngwaa ngwaa in English